नेपालमा ३७ हजार जनाले कोरोनालाई जिते, शनिबार विहानै थप एक जनाको ज्यान गयो — onlinedabali.com
नेपालमा ३७ हजार जनाले कोरोनालाई जिते, शनिबार विहानै थप एक जनाको ज्यान गयो
काठमाडौँ । नेपालमा कोरोना भाइरसलाई जितेर घर फर्किनेको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ । शनिबर विहानसम्म आइपुग्दा कोरोना जित्नेको संख्या ३७ हजार नजिक पुगेको छ ।
शुक्रबार थप ९७२ जना कोरोनामुक्त भएर डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको थियो । शुक्रबार कोरोना जित्नेको कुल संख्या ३६ हजार ६७२ पुगेको थियो । यो संख्या शनिबार विहानसम्म आउँदा बढेर ३७ हजार नजिक पुगेको बताइएको छ ।
कुल ५१ हजार ९१९ संक्रमितमध्ये अब १४ हजार ९२५ जना क्वारेन्टि तथा आइसोलेसन र अस्पतालहरुमा उपचार गराइरहेका छन् । धेरैको स्वास्थ्य अवस्थामा सामान्य रहेको बताइएको छ ।
शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेश ब्रिफिङमा बोल्दै मन्त्रालयको प्रबक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ६९६ कोरोना संक्रमित थपिएका जानकारी दिएका थिए ।
जसमा काठमाडौंमा ६२०, ललितपुरमा ३८ र भक्तपुरमा ३८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । हालसम्म उपत्यकामा कोराना संक्रमितको संख्या १० हजार ७ सय ८ पुगेको थियो । त्यो संख्या शनिबार बढेक छ । शुक्रबार देशभर थप १४५४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएकाे पुष्टि भएको थियो ।
मन्त्रालयका प्रबक्ता डा. गौतमले शनिबार थप ५ जनाको कोरोनाका कारण जु का अनुसार देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या १४९२५ छ । ८२९१ जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन् भने ६६३४ होम आइसोलेसनमा रहेको छन् ।
शुक्रबारसम्म नेपालमा ८ लाख २१ हजार १८६ जनाको पीसीआरबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ । त्यसैगरी क्वारेन्टिमा ६ हजार ७८ जना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यसैबीच कोरोनाका कारण शनिबार विहानै थप एकजनाको ज्यान गएको छ । स्याङ्जाका एक संक्रमितको पोखरामा उपचारको क्रममा ज्यान गएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालअन्तर्गतको कोभिड-१९ उपचार केन्द्रको आइसियुमा भर्ना भई उपचाररत स्याङ्जा पुतलीवजार नगरपालिका – १ का ८५ वर्षीय पुरुषको शनिबार विहान ६:३२ बजे उपचारको क्रममा निधन भएको निर्देशक सह.प्रा.डा. अर्जुन आचार्यले जानकारी दिएका छन् । भदौ २४ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। योसँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ३२३ पुगेको छ ।
यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ५ हजार ४६७ जनाले कोरोना जितेर घर फर्किएका छन् । शुक्रबार थप ६ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएसँगै यो संख्या पुगेको हो । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले शुक्रवार कैलालीका ५ र कञ्चनपुरका एक जनालाई डिस्चार्ज गरिएको जानकारी दिएका थिए ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीका अनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै संक्रमित रहेको कैलालीका एक हजार ५ सय एक निको भएर घर फर्किएका छन्। यस्तै डोटीका ९ सय सात, अछामका ८ सय ९३, कञ्चनपुरका ६ सय ७४, बाजुराका चार सय ४२ जना, बझाङका तीन सय ६४, बैतडीका तीन सय २५, डडेल्धुराका तीन सय १६ र दार्चुलाका ४५ जना संक्रमितले कोरोना जितेर घर फर्किएका छन् । सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या ६ हजार चार सय नाघेको छ भने उनीहरु मध्ये १४ जनाको ज्यान गएक छ ।